Ozoa Bọọdụ Eletrik - Imewe Mmewe
Bọọdụ Eletrik Igwe igwe kwụ otu ebe na ọkụ elektrik OZOa nwere eriri nwere ọdịdị 'Z' pụrụ iche. Okpoko ahụ na-abụ ahịrị na-adabaghị adaba nke na-ejikọ ihe ndị dị mkpa maka ụgbọ ahụ, dịka wiil, sterịn, oche na pedals. 'Dị 'Z' gbadoro ụkwụ n'ụzọ ga - eme ka ihe owuwu ya wee sie ike na - emechi emechi. A na-enye akụ na ụba nke ibu site na iji profaịlụ aluminom n'akụkụ niile. A na-agbanye batrị lithium ion batrị nwere ike ịbanye na etiti ahụ.
Aha oru ngo : Ozoa, Aha ndị na-emepụta ya : Nimrod Riccardo Sapir, Aha onye ahịa : Ningbo MYWAY Intelligent Technology Co. Ltd..
Bọọdụ Eletrik Nimrod Riccardo Sapir Ozoa